Yini ukwelashwa kwama-parasites emathumbu emakati? | Amakati kaNoti
Ungasusa kanjani izimuncagazi emathunjini emakati?
UMonica sanchez | | Izifo
Ngeshwa, wonke amakati angahlushwa isifo se-parasite. Kungenxa yokuthi umama wabo ubadlulisele kubo enganakile, noma ngoba sebehlangane nalezi "mpethu" uqobo, iqiniso ukuthi nganoma yisiphi isikhathi siyabona ukuthi abaphilile ... ngaphandle kokuthi senze okuthile ukukugwema .
Ukubheka lokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi iziphi izimuncagazi zamathumbu ezivame kakhulu emakati, izimpawu abazibangelayo nokuthi benzeni ukuze baziqede.
2 Ngazi kanjani ukuthi ikati lami linalo?
3 Ilashwa kanjani?
Ziningi izimuncagazi emathunjini ezithinta amakati; noma kunjalo, okuvame kakhulu ukuthi:
I-Ascaris: njengoba I-Toxocara cati. Ziyizikelemu eziyindilinga eziphakathi kuka-4 no-8cm ubude. Balala emathunjini, lapho bande khona baze babangele ukuphazamiseka. Zingathinta nabantu.
Ama-Hookworms: Njengoba I-Acylostoma tubaeforme. Zincane, zi-1cm izikelemu eziyindilinga ezingadala i-gastroenteritis ebulalayo emantwaneni.
Ubunakho: Njengoba I-Dipylidium caninum futhi i I-Taenia taeniaeformis, bayizikelemu. Esokuqala sisatshalaliswa ukungeniswa kwezinambuzane zangaphandle ezingcolisiwe (amazenze nezintwala), kanti eyesibili ngokungenisa amagundane. Azidluliselwa kubantu futhi kaningi azibangeli izinkinga eziningi emakati, ngoba zona ngokwazo ziyawaxosha nge-anus.
I-Hydatidosis: Njengoba I-Echinococcus granulosus o multilocularis. Yizibungu ezingazibangeli nezimpawu ezinzima, kepha zingathinta abantu ngokwakha ama-cyst ezithweni ezahlukahlukene.
Ngazi kanjani ukuthi ikati lami linalo?
Indlela eshesha kakhulu futhi esebenza kahle kunazo zonke ukuthatha isampula lesitokisi uya kudokotela wezilwane ukuze ahlaziywe. Manje, singasola futhi uma ngabe ikhona noma cha uma:
Sibona imikhondo yamaqanda noma izibungu ezindaweni abazisebenzisela ukuphumula.
Banesifo sohudo (ikakhulukazi esibucayi kuzinyane).
Izinwele ziba buthuntu futhi zome.
Ukwelashwa kwama-parasites emathunjini emakati kulula kakhulu: siqukethe ngokunikeza i-antiparasitic (ngokumelene nezikelemu) kuqala emavikini amathathu nanhlanu okuphila, bese siphinda kabili ngonyaka. Uma usumdala, i-pipette esebenza ngokumelene nalezi zinambuzane, ezinjenge-Advocate noma iStronghold, ingafakwa kanye ngenyanga noma lapho udokotela wezilwane ebona kungcono.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Izifo » Ungasusa kanjani izimuncagazi emathunjini emakati?
Ukulawulwa kokuzalwa emakati
Ukufana phakathi kwamakati namahlosi